Usoro ojiji - arcorarobinet
Welcome / Usoro ojiji
Nnọọ na webụsaịtị arcorafaucet.com. arcorafaucet.com na-enye gị ọrụ ya dabere na ọkwa, usoro na ọnọdụ edepụtara na nkwekọrịta a ("Agreement"). Na mgbakwunye, mgbe ị jiri ọrụ arcorafaucet.com ọ bụla (dịka ọmụmaatụ, nyocha ndị ahịa), ị ga-edobe iwu, ntuziaka, atumatu, usoro na ọnọdụ ndị metụtara ụdị ọrụ a, ma tinye ha na nkwekọrịta a site na ntụnye aka a. arcorafaucet.com nwere ikike igbanwe saịtị a yana usoro na ọnọdụ a n’oge ọ bụla.
,Nweta, nchọgharị ma ọ bụ ojiji ọ bụla nke saịtị ahụ na-egosi nnabata gị nke usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a. Biko gụọ nkwekọrịta a nke ọma tupu ịga n'ihu.
Represent na-anọchite ma nye ikike na ị dịkarịa ala 18 afọ ma ọ bụ na ị na-eleta saịtị ahụ n'okpuru nlekọta nke nne na nna ma ọ bụ onye nlekọta. Dabere na usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a, arcorafaucet.com na-enye gị oke ikikere, nwepu, enweghị ike ịfefe na ikike na-enweghị sọọsọ iji nweta ma jiri saịtị ahụ site na igosipụta ya na ihe nchọgharị Internetntanetị naanị iji zụta ihe onwe onye. . A na-ere ihe ndị dị na saịtị ma ọ bụghị maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ na nnọchite nke ndị ọzọ, belụsọ site na iji arcorafaucet.com ikike izipu ozi. Imebi iwu ọ bụla megidere nkwekọrịta a ga-eweta ozugbo ịweghachi ikike enyere na paragraf a n’enweghị ọkwa.
Ewezuga otu enyere na paragraf dị n'elu, ị gaghị mụta nwa, kesaa, gosipụta, ree, mgbazinye, kesaa, mepụta ọrụ ndị ọzọ, tụgharịa, gbanwee, gbanwee injinia, ghasasịa, gbasasịa ma ọ bụ na-erigbu saịtị a ma ọ bụ akụkụ ọ bụla ya belụsọ na enyere ikikere doro anya. site na arcorafaucet.com na ide. Maynweghị iji ozi enyere na saịtị ahụ ma ọ bụ jiri saịtị ahụ maka elele ụlọ ọrụ ọzọ, belụsọ na arcorafaucet.com. arcorafaucet.com nwere ikike ịjụ ọrụ, kwụsị akaụntụ na / ma ọ bụ kagbuo iwu ọ nwere ezi uche, gụnyere, na-enweghị njedebe, ma ọ bụrụ na arcorafaucet.com kwenyere na omume ndị ahịa megidere iwu dị adị ma ọ bụ na-emebi ọdịmma nke arcorafaucet.com.
Gaghị ebugote, kesaa ma ọ bụ tinye n'ụzọ ọ bụla na saịtị a ọdịnaya, ozi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke (a) na-emebi ma ọ bụ na-emebi ikike nwebisiinka, patent, ụghalaahịa, akara ọrụ, ihe nzuzo azụmaahịa ma ọ bụ ikike ikike ndị ọzọ nke mmadụ ọ bụla; (b) bụ nke na-ekwutọ mmadụ, na-eyi egwu, na-ekwutọ mmadụ, okwu rụrụ arụ, na-adịghị mma, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ nwere ike ibute ibu ọrụ obodo ma ọ bụ mmebi iwu n'okpuru United States ma ọ bụ iwu mba ụwa; ma ọ bụ (c) gụnyere ahụhụ, nje, ikpuru, ọnyà, Trojans ma ọ bụ koodu ndị ọzọ na-emerụ ahụ. arcorafaucet.com nwere ike ekenye gị okwuntughe na njirimara akaụntụ iji nyere gị aka ịnweta ma jiri akụkụ ụfọdụ nke saịtị a. Mgbe ọ bụla ị jiri paswọọdụ ma ọ bụ njirimara, a ga-ewere gị ka ikike ịnweta ma jiri saịtị ahụ n'ụzọ kwekọrọ na usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a, yana arcorafaucet.com enweghị ọrụ iji nyocha na ikike ma ọ bụ isi mmalite nke ihe ọ bụla ohere dị otú ahụ ma ọ bụ ojiji nke saịtị.
You ga-abụrịrị ọrụ maka nnweta na ojiji nke saịtị a site n'aka onye ọ bụla na-eji paswọọdụ na njirimara nke e kenyere gị na mbụ, ma ị nwere ike ịnweta ma jiri saịtị a ma ọ bụ na ọ bụghị, ma, na-enweghị njedebe, nkwukọrịta na nnyefe niile. na ọrụ niile (gụnyere, na-enweghị njedebe, ọrụ ego) kpatara site na ịnweta ma ọ bụ ojiji dị otú ahụ. Bụ naanị ọrụ maka ichebe nchekwa na nzuzo nke paswọọdụ na njirimara enyere gị. Ga-emerịrị ngwa ngwa gwa arcorafaucet.com maka iji paswọọdụ gị ma ọ bụ njirimara gị eme ihe ọ bụla na-enwetaghị ikike iji mebie nchebe saịtị a.
Nyocha na nkwenye
Ọ gwụla ma e nyere ya n'ụzọ ọzọ na nkwekọrịta a ma ọ bụ na saịtị ahụ, ihe ọ bụla ị nyefere ma ọ bụ tinye na saịtị ahụ na / ma ọ bụ nye arcorafaucet.com, gụnyere, na-enweghị njedebe, echiche, etu esi arụ, usoro, ajụjụ, nyocha, echiche na ntụnye (mkpokọta) , "Nnyefe") bụ ma a ga-emeso ya dị ka onye na-abụghị nke nzuzo na nke na-abụghị nke onwe, yana site na ịnyefe ma ọ bụ izipu, ị kwenyere ịnye ikikere a na-apụghị ịgbagha agbagha maka ntinye na ikike ikike ọgụgụ isi niile dị na ya. Metụtara (ewepu ikike omume dịka nwebisiinka) arcorafaucet.com n'efu na arcorafaucet.com ga-enwe nnwere onwe eze, zuru ụwa ọnụ, nke na-adịgide, ikike na-enweghị mgbagha na mbufe iji, detuo, kesaa, gosipụta, bipụta, rụọ, ịgbazite, zipu, imeghari, mepụta ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ site na Nnyefe ndị a n'ụzọ ọ bụla na n'ụdị ọ bụla, na ịsụgharị, gbanwee, gbanwee injinia, wepu ma ọ bụ kesaa S ndị a. ma ọ bụ ozi. Nnyefe niile ga-abụ naanị ihe akụrụngwa nke arcorafaucet.com ma agaghị eweghachi gị ya ma ị kwenyere na ị gaghị ebulite esemokwu ọ bụla gbasara ojiji ọ bụla nke arcorafaucet.com na-eme n'ọdịnihu.
Warrant na-ekwe nkwa na ntinye gị, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ ya, doro anya ma nweere onwe ya pụọ ​​na ịda iwu nke ikike ikike ọgụgụ isi, ịgba akwụkwọ ma ọ bụ nkwupụta nke ndị ọzọ. arcorafaucet.com anaghị eburu ibu ọrụ maka iji ikike nwebiisinka ma ọ bụ ikike ọ bụla nke ndị ọzọ mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Agree kwenyere ịgbachitere ma kwụghachi ụgwọ Nkwado megide ọnwụ ọ bụla kpatara site na iji Ndenye maka ebumnuche ọ bụla.
Na mgbakwunye na ikike metụtara ngbanye ọ bụla, mgbe ị biputere nkọwa ọ bụla ma ọ bụ nyocha ọ bụla na saịtị ahụ, ị ​​na-enye arcorafaucet.com ikike iji aha ị nyefere na nyocha ọ bụla, nkọwa ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ, dị ka ọdabara. . na ọkwa dị otu a, okwu ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ. Represent na-anọchite ma nye ikike na ịnwere ma ọ bụ jikwa ikike niile na nyocha ọ bụla, nkọwa na ọdịnaya ndị ọzọ ị biputere na saịtị a yana iji nyocha gị, nkọwa gị ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ site na arcorafaucet.com agaghị emebi ma ọ bụ mebie ikike. nke ndị ọzọ. Must gaghị eji adreesị ozi-e ụgha, mee ka ị bụ onye ọzọ karịa onwe gị, ma ọ bụ duhie arcorafaucet.com ma ọ bụ ndị ọzọ dịka mmalite nke nrubeisi ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla. arcorafaucet.com nwere ike, mana ọ gaghị akwụ ụgwọ iji wepu ma ọ bụ dezie Ntinye (gụnyere nkọwa ma ọ bụ nyocha) maka ihe ọ bụla.
IWU ỌB .R.
Ederede niile, eserese, eserese ma ọ bụ onyonyo ndị ọzọ, akara ngosi bọtịnụ, obere vidiyo, akara njiri mara, slogans, aha ahia ma ọ bụ sọftụwia okwu na ọdịnaya ndị ọzọ na weebụsaịtị arcorafaucet.com (mkpokọta, "Ọdịnaya"), bụ nke arcorafaucet.com ma ọ bụ nke ya. ndị na-eweta ọdịnaya kwesịrị ekwesị. Nweghị ike iji, mepụtagharị, detuo, gbanwee, nyefee, gosipụta, bipụta, ree, ikikere, rụọ ọhaneze, kesaa ma ọ bụ jiri azụmahịa mee ihe ọ bụla nke ọdịnaya ma ọ bụ tufuo ọdịnaya ọ bụla site n'ụzọ anaghị akwado arcorafaucet.com, na-enweghị tupu nkwupụta ederede doro anya nke arcorafaucet.com. A machibidoro iji nsị data, robot ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ maka ịnakọta na wepụ data na arcorafaucet.com yana iji ụghalaahịa ma ọ bụ akara ọrụ arcorafaucet.com na meta-tags. Nwere ike ịlele ma jiri ọdịnaya naanị maka ozi gbasara gị na maka ịzụ ahịa na ịtụ ahịa na saịtị ahụ na enweghị nzube ọzọ. Nchịkọta, ndokwa na nzukọ nke ọdịnaya niile na saịtị a ("mkpokọta") bụ naanị nke arcorafaucet.com. Nweghị ike iji ọdịnaya ma ọ bụ mkpokọta nke arcorafaucet.com n'ụzọ ga-emebi ma ọ bụ mebie arcorafaucet.com ma ọ bụ n'ụzọ nwere ike ịkpata ọgba aghara ma ọ bụ mebie iwu na usoro iwu ọ bụla. Sọftụwia niile ejiri na saịtị a (“sọftụwia”) bụ nke arcorafaucet.com na / ma ọ bụ ndị na-eweta sọftụwia. Ọ bụ iwu mba na mba, mba na mba na-echekwa ihe niile dị na ya, nchịkọta na sọftụwia. Ikike niile enyereghị n'ụzọ doro anya ka arcorafaucet.com kpuchitere. A ga-ekpe ndị dara iwu ikpe ruo n'ókè iwu zuru oke.
arcorafaucet.com ghotara ma kwanyere ugwu nwebisiinka na ighalaahia niile. Ka o siri dị, iji ihe ọ bụla a na-eme na televishọn, sinima, egwu, emume nkiri ma ọ bụ aha ndị ọzọ ma ọ bụ aha ndị ọzọ enweghị njikọ na arcorafaucet.com na ọ bụ naanị ihe nwebisiinka nke ndị nwebisiinka.
INTELLECTUAL PROPETY INRRICPENT IWU
Ọ bụ iwu nke arcorafaucet.com ime ihe kwesịrị ekwesị mgbe ọ dị mkpa iji kwado ma mata iwu niile dị mkpa, iwu gọọmentị etiti yana nke mba ụwa n'ihe metụtara ihe ekwenyere na ọ na-emebi ụghalaahịa ọ bụla, nwebisiinka, patent na iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ. . . Ọ bụrụ na ị nwere ikike ọgụgụ isi na ị kwenyere na arcorafaucet.com na-ere, na-enye maka ire ma ọ bụ na-ewepụta ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ dịnụ nke na-emebi ikike ikike ọgụgụ isi gị, zipụ ozi ndị a n'ụzọ zuru ezu na service@arcorafaucet.com
Ihe nzipu aka nke eletrọniki ma obu aru nke onye enyere ikike imechitere onye nwe ya ihe edeputara bu agabiga;
Nkọwa nke ebubo ọrụ ma ọ bụ ihe mebiri emebi;
Nkọwa nke ebe ebe ebubo ebubo mmebi iwu na saịtị ahụ (URL nke ngwaahịa (s));
Ozi zuru oke iji nye anyị ohere ịkpọtụrụ gị, dị ka adreesị gị, nọmba ekwentị na adreesị ozi-e;
Nkwupụta sitere n'aka gị na ị nwere ezigbo okwukwe na nkwenye nke ihe a enyeghị ikike ikike nwebisiinka ma ọ bụ onye nwe ikike ọzọ, onye nnọchi anya ya, ma ọ bụ iwu;
Nchọpụta nke ikike ọgụgụ isi nke ị kwenyere na webụsaịtị ahụ megidere (dịka "XYZ copyright", "ABC ụghalaahia, Reg. Nke 123456, edebara aha na 1/1/04", wdg);
Nkwupụta nke gị na ozi na ọkwa ndị dị n'elu ziri ezi yana, n'okpuru ntaramahụhụ ịgha ụgha, na ị bụ onye nwebisiinka ma ọ bụ nye ikike imechitere onye nwe ya ebubo ebubo na ọ ga-enwerịrị ikike ya.
Mkpebi na mmetụta nke oge
Na mgbakwunye na usoro iwu ọ bụla ma ọ bụ usoro ziri ezi, arcorafaucet.com nwere ike, na-enweghị ọkwa, kwụsị nkwekọrịta ahụ ozugbo ma ọ bụ kagbuo ikike ma ọ bụ akụkụ niile nke ikike gị enyere n'okpuru nkwekọrịta a. Mgbe ịkwụsị nkwekọrịta a, ị ga-akwụsị ozugbo ịnweta na ojiji nke saịtị na arcorafaucet.com ga, na mgbakwunye na usoro iwu ọ bụla ma ọ bụ nke ziri ezi, weghachite okwuntughe niile na njirimara akaụntụ e nyere gị. na iji saịtị a n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ. Nkwụsị ọ bụla nke Agreement a agaghị emetụta ikike na ọrụ dị iche iche (gụnyere, na-enweghị njedebe, ụgwọ ịkwụ ụgwọ) nke ndị ọzọ na-eme tupu ụbọchị nkwụsị.
AKW ANDKWỌ NA LB OFR OF IBI
EBUGHW N'OTHERLỌ ỌZỌ NA-ECHICHE N'THELỌ NCHE A B OF N'ALELỌ NCHE A, Ọ NA-ANA ỌR S N'ODLỌ A N',LỌ A, saịtị a, ngwaahịa ndị e nyere maka ire ere na saịtị a na ụzọ ndị a na-enye site na "arcouc.com" ". arcorafaucet.com emeghi nnọchite ma ọ bụ akwụkwọ ikike nke ụdị ọ bụla, ngosipụta ma ọ bụ mejupụtara, gbasara ọrụ nke saịtị ma ọ bụ ozi, ọdịnaya, akụrụngwa ma ọ bụ ngwaahịa ndị dị na saịtị a ma e weghara ebe a. KWES WARR WAR akwụkwọ ikike niile, kwupụta ma ọ bụ mejupụtara, gụnyere, ma ọ bụghị nanị na ọ kpaara aka, ikikere nke ọrụ ahịa na nke ọma maka ebumnuche pụrụ iche, na-enweghị mmebi iwu, isiokwu, iji nkịtị, usoro ziri ezi na usoro. Ebe a nwere ike ịgụnye INACCURACIES, ERRORS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. arcorafaucet.com Adabaghị na ọdịnaya ga-UNITERRUPTED ma ọ bụ njehie-FREE. KWES THER EX KWES PR P IWU KWES BYR, KWES ,R,, arcorafaucet.com KWES BER L LB FORR FOR IHE Ọ B DLA Ọ BAM Ọ BIN Ọ BY Ọ B FROM Ọ B THIS Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF Ọ B OF IHE KWESTRX KWES PR BY KWES BYR BY KWESWR LA KWES LAR, KWES'SR, KWESucR,, arcorafaucet.com NTIKWU ND L Ọ B TO N'TOLỌ Ọ BY Ọ B (Ọ B (Ọ B ( Na-ebute iwu na-ebo ebubo na ọ bụ ikike nke arcorafaucet.com.
Nabata iwu ahụ
Biko rịba ama na enwere ike inwe ụfọdụ iwu anyị agaghị anabata ma chọọ ịkagbu. arcorafaucet.com nwere ikike, na aka aka ya, ịjụ ma ọ bụ kagbuo iwu ọ bụla maka ihe ọ bụla. Ọnọdụ ụfọdụ nke nwere ike ibute kagbuo iwu gị gụnyere mmachi na ọnụọgụ dị maka ịzụta, enweghị nghọta ma ọ bụ njehie na ngwaahịa ma ọ bụ ọnụahịa ọnụahịa, ma ọ bụ nsogbu ndị ngalaba kredit na mgbochi kredit chọpụtara. Anyị nwekwara ike ịchọ nkwenye ma ọ bụ ozi ọzọ tupu ịnakwere iwu. Anyị ga-akpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na akagbu ma ọ bụ akụkụ nke iwu gị ma ọ bụ ọ bụrụ na achọrọ ozi ndị ọzọ iji nabata iwu gị.
RBỌDY AKWKWỌ AKWYKWỌ
Agbanyeghi na arcorafaucet.com na-agba mbọ ị nweta ozi ngwaahịa na ọnụahịa ziri ezi, enwere ike ihie ọnụahịa ma ọ bụ ndenye ederede. arcorafaucet.com enweghị ike ikwenye ọnụahịa nke ihe ruo mgbe ị gachara. Ọ bụrụ na edepụtara ihe na ọnụahịa na-ezighi ezi ma ọ bụ jiri ozi na-ezighi ezi n'ihi njehie na ọnụahịa ma ọ bụ ozi ngwaahịa, arcorafaucet.com ga-enwe ikike, naanị anyị nwere ike, ịjụ ma ọ bụ kagbuo iwu ọ bụla enyere maka ihe a. Ọ bụrụ na ihe adịghị mma, arcorafaucet.com nwere ike, na uche anyị, kpọtụrụ gị maka ntuziaka ma ọ bụ kagbuo iwu gị ma gwa gị ụdị nkagbu ahụ.
I ahia ego di iche iche
Ọnụahịa ndị a na-ere na arcorafaucet.com dabere na ọnụ ọgụgụ ndị agbakọtara na dollar US (US $). Ọnụahịa egosiri na ego ndị ọzọ na-agbanwe site na dollar US site na iji ọnụego mgbanwe kachasị ọhụrụ. N'ihi ngbanwe na ụkpụrụ ego, ọnụahịa egosiri na ụka ndị na-abụghị nke US na saịtị nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị. Mpaghara nke saịtị ebe ngalaba ego ndi na-abụghị nke US nwere ike ịbụ ezighi ezi gụnyere, mana ọnweghị oke, ọkọlọtọ nkwado, ibe nkwado, yana ozi na ibe edemede nke ngwaahịa.
Saịtị a nwere ike ịnwe njikọ na saịtị ndị ọzọ na ịntanetị nke ndị ọzọ nwere ma na-ejikwa. Kwenyere na arcorafaucet.com abụghị ọrụ maka arụmọrụ ma ọ bụ ọdịnaya dị na ma ọ bụ site na saịtị dị otú ahụ.
Agree kwenyere na usoro arcorafaucet.com maka ịgha iwu ọ bụla ma ọ bụ iyi egwu megidere nkwekọrịta a agaghị ezu oke yana na arcorafaucet.com ga-enwe ikike igbu ma ọ bụ nkwupụta akọwapụtara, ma ọ bụ ha abụọ, na mgbakwunye na mmebi ọ bụla nke arcorafaucet. ịnakọta yana ụgwọ ezi uche dị na ụdị ụdị esemokwu ọ bụla gụnyere, na-enweghị mmachi, ụgwọ ọka iwu.
Onweghi ikike ma obu mmezi nke arcorafaucet.com ga-abu nke ozo, ma obu na iwu ma obu nha anya, gunyere, na enweghi oke, mmebi, iwu, ego onye oka iwu na ego.
Enweghị ụdị iwepụ nke arcorafaucet.com nke ikike ya ma ọ bụ ọgwụgwọ ya n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a na-egosi ọrụ dịịrị iji wepụta mgbagha yiri nke a, ọdịnihu ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.